Published April 30, 2020 at 8:21 PM CDT
Guddoomiyaha ayaa sheegay in xitaa iyada oo loo marayo qaybo ka mid ah gobolka ay ka furi doonaan awood xaddidan laga bilaabo berri iyada oo ay tiri fayrasku meel walba ma tagayo goor dhow.
Tirada kiisaska togan ee aagga Magaalada Sioux City Metro ayaa kor u kacay in ka badan 1,600.
Maalinta Isniinta, goobta TestIowa ayaa laga furi doonaa Woodbury County. Xubnaha Ilaalada Qaranka ee Iowa ayaa dejiyay goobta ay ku yaalliin jaamacadda Western Iowa Tech Community College.
The Diocese of Sioux City wuxuu leeyahay tijaabinta waxay usameyn kartaa horaanta usbuuca soosocda dadka degan iyo shaqaalaha hoyga howlgabka ee Holy Ghost ka dib markii labo xubnood oo ka tirsan shaqaalaha ay tijaabinayeen cudurka COVID-19.
Tyson Fresh Meats waxay si ku meel gaadh ah u hakineysaa wax soo saarka laga bilaabo Jimcaha ilaa Isniinta oo ka socota warshadda hilibka lo'da ee Dakota City. Shirkadda waxay qorsheyneysaa inay si qoto dheer u nadiifiso warshadda.
4,300 shaqaalaha ka shaqeeya warshadda wali waa la siin doonaa lacag.
Tyson wuxuu leeyahay Ilaalada Qaranka ee Nebraska waxay ka caawineysaa tijaabinta shaqaale badan.
Coronavirus-ku wuxuu sii wadaa inuu kaxeeyo lambarrada shaqo la aanta ee sare ee Iowa.
Toddobaadkii la soo dhaafay, ku dhawaad ​​29,000 shaqaale ah ayaa gudbiyay sheegashooyin bilow ah oo loogu talagalay kaalmada shaqo la'aanta, in kabadan usbuucii ka horeeyey wadarta guud ee 170,000.
Wadarta guud ee waxtarka lagu bixiyay Iowa usbuucii hore waxay kor u dhaaftay 50 milyan oo doolar.
Local News LocalIowaSioux CityWoodbury CountyNebraskaSouth DakotaIowa Governor Kim ReynoldsWestern Iowa TechnewsDakota CountyCOVID-19SomaliTyson Fresh Meats
Lambarrada kiisaska togan ee COVID-19 ee aagga metro ee Sioux City ayaa si weyn u booday Khamiista.Degmada Dakota waxay aragtay kororka ugu weyn iyadoo…
Badhasaabada xaafadaha magaalada Sioux City waxay soo saareen bayaan ay ugu baaqayaan dhammaan ururada caafimaadka bulshada in ay kordhiyaan heerka daah…
Maalin kadib markii badhasaabyada xaafadaha magaalada Sioux City ay codsadeen in daah furnaan dheeri ah laga helo ganacsatada maxalliga ah ee soo tebisa…